बल्लबल्ल डाक्टरले बाबुरामका लागि प्यासेजमा बेड मिलाए तर…. – AB Sansar
बल्लबल्ल डाक्टरले बाबुरामका लागि प्यासेजमा बेड मिलाए तर….
May 17, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on बल्लबल्ल डाक्टरले बाबुरामका लागि प्यासेजमा बेड मिलाए तर….
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, ताक्लुङ्गकी ४० वर्षीया सविता लामिछाने बिहीबार राति शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको प्राङ्गणमा भेटिएकी थिइन्। अस्पताल प्राङ्गणको चिसो भुइँमा घोप्टो परेर अक्सिजनको प्रतीक्षामा लडिरहेका थिए ४२ वर्षीया सविताका श्रीमान् बाबुराम लामिछाने । उनको शरीरमा अक्सिजनको तह निकै तल झ रिसकेको थियो ।
२९ वैशाख (बुधबार) मा सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा श्रीमान्‌लाई पुर्‍याएकी सविताले बेड र अक्सिजन नपाएपछि भोलिपल्ट बिहीबार टेकुमा पुर्‍याएकी थिइन् । तर, सोही दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दै थिए, ‘अस्पतालहरूमा बेडको खासै कमी छैन । बेड एकातिर बिरामी अर्कोतिर फर्किएको अवस्था छ । बेडमा भन्दा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ, ताकि बाँच्न सकियोस् । त्यसकारण खासखास अस्पतालमा बिरामी केन्द्रित हुने र अरु ठाउँ रिक्त हुने स्थिति छ । सबै ठाउँमा बेडको उपलब्धता छ । बेड मात्र होइन, अक्सिजनसहितका बेडहरू । आवश्यक अन्य उपकरणसहितका बेडहरू उपलब्ध छ ।’
तर, अस्पतालको प्राङ्गणमा भने बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजन नपाएर बिरामी ढलिरहेका कारुणिक दृश्य देखिन्थे । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ एकातिर अस्पतालहरूको हालत अर्कोतिर देखिन्थ्यो । प्राङ्गणमा कोभिडसँग जुधिरहेका बाबुरामले मलिन स्वरमा हामीसँग भरोसा मागे, ‘श्रीमती एक्लै छिन् । मलाई बेडमा नलगेसम्म नजानू ल ।’ त्यसो त यसअघि उनीसँग न चिनजान थियो, न बोलचाल नै भएको थियो । त्यही प्राङ्गणमा भेट भएको थियो । दुःखमा उनले हामीसँग सहारा खोजेका थिए । उनलाई प्राङ्गणबाट बेडमा सारेपछि निस्कनै लाग्दा फेरि सविताले भनिन्, ‘आज यतै बस्न मिल्दैन ?’ उनको पीडायुक्त आवाजपछि राति अबेरसम्म प्राङ्गणमै बस्यौँ । बाबुरामको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएपछि आपत् परे फोन गर्न सुझाएर मध्यराति हामी घर फर्किएका थियौँ ।
काठमाडौंमा घर बनाउने र छोरीहरूलाई पढाउने बाबुरामको सपना भने अधुरै रह्यो । छोरीहरूलाई पढाउनकै लागि काठमाडौंको गोलढुंगामा चार आना जग्गामा ११ वैशाखमा जग हालेर घर फर्किएका रहेछन्, बाबुराम । काठमाडौंमा घरको जग हाल्दै गरेका बाबुराम । ‘गाउँको घर पनि सडक बनाउन भनेर डोजरले भत्कायो । अब काठमाडौंमै बस्ने भनेर अस्ति मात्र जग हालेको थियो । १८–१९ गते फेरि घर बनाउन काठमाडौं आउने तयारी थियो । अब कति दुःख पाउने हो थाहा छैन । घरमा बाइक छ, अब त्यो के काम ?’, उनी विलाप गर्छिन् ।
कपाल मुण्डन गरेपछि केकीले भनिन्–‘एकछिन त रोएँ’
March 15, 2021 Ab-संसार